Flam To Myrdal, Noweyi: A Beautiful Summer Stop | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > Flam To Myrdal, Noweyi: A Beautiful Summer Stop
Nguva yekuverenga: 3 maminitsi(Last Updated On: 04/02/2020)
The Flam njanji mutsetse kubva Flam kuna Myrdal anonzi mumwe akanaka kwazvo chitima nzendo munyika uye tinogona kunzwisisa nei. Rwendo chete anotora paawa asi zvandakaona zvechokwadi mweya-kupinza. Musapotse ruzivo urwu apo kushanyira Norway. Neawa rwendo, chitima anotora yakazobuda kubva Sognefjord muna Flam iri wegungwa, kuna Myrdal gomo yemapurisa iri 867 metres pamusoro pegungwa. Uyu ndiwo mumwe steepest mureza-Gauge njanji mitsetse munyika. Kuchiteshi mutsetse akatora 20 makore kupedza. The nokuvhiringidza tunnels kuti vanomhanya uye kubva mugomo anoratidza kure zvikuru ushingiwo uye unyanzvi ouinjiniya kuti Norwegian njanji kare akamboona. Flam kuna Myrdal, Noweyi: A Beautiful Summer Stop zvechokwadi rwendo hwose.
Akatasva ari Flam Railway
Kutora chitima kubva Flam kuna Myrdal achakutora kuburikidza 20 tunnels, 18 izvo dzakavakwa namaoko, uye kumisa pa misha inoverengeka sezvo nyoka nzira yayo kukwira Flam Valley. The chitima rinopa vanhu munhu Panoramic maonero asi edzai uye kuwana chigaro pedyo hwindo kuti zvakanaka maonero uye izvi zvinogona kuzarura mu chirimo nokuti nemamwe rinokosha ruzivo. Myrdal chiteshi kumusoro mugomo uye chinosanganisira chinhu asi yokumirira, tikiti dhesiki, uye diki Datenroku. Unogona kuchovha chitima kumusoro uye pasi mugomo.
Flam kuna Myrdal muna Summer
Summer ndiyo nguva yakakwana kutora chitima kubva Flam kuna Myrdal. The ekunze inodziya uye zvose munyoro! Funga tikaisa zvikomo uye zvinoonekera sekristaro mvura inomhanya nemiriwo akanaka uye maruva zvizere maruva. Kunewo Hiking mudungwe munzira zvose kubva Flam uye Myrdal. Izvi zvinoreva kuti iwe unogona kubata chitima kuna Myrdal uye hike shure pasi uye vanakidzwe pamushana.
Kana paine chimwe chinhu unofanira kuita kana kushanyira Norway, kuchiteshi chitima kubva Flam kuna Myrdal zviri. Chinhu chakanaka Summer chemabhazi. The chitima anomhanya gore rose pamwe kusvikira 10 kusimuka pazuva iri Summer. Purchase matikiti munharaunda muNorway chero aigarira chiteshi kana kudana NSB kufona centre. Ivo Parizvino asina kuwanikwa paIndaneti. Iva nechokwadi kuti matikiti venyu chitima ichi pamunongopinda anosvika Norway kudzivisa mwoyo uye nokuda muupenyu!
Tiri kupa European chitima matikiti, chete kuenda kwedu Save A Train Website uye vanakidzwe vatasvi.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, zvino tinya pano: https://embed.ly/code?url=https://www.saveatrain.com/blog/flam-to-myrdal-norway/- (Mupumburu pasi kuona Embed Code)
#flam #Myrdal #chirimo travelnorway